raha nampifandray ny fomba fifantenana ny governemanta vaovao sy ny vokatry ny andro ratsy nandalo teto amin’ny firenena farany teo. Lalam-pirenena iny ary azo atao hoe lalandran’i Madagasikara toy ny lalan’i Toamasina. Tetikasa matetika no hananganana azy ireny fa tsy tena volan’ny fanjakana. Tsy atahorana ny hisian’ny fihotsahana goavana toy ireny, raha tena manara-penitra, hoy hatrany izy. Antony hiantsoako matetika ny mpitondra io hoe mila alefa haingana ilay fivoarana fa mamono olona ary mipoitra izy io. Eo amin’ny resaka seraseran’ny governemanta sy ny mpanohitra, amiko dia tsy fahaiza-miasa no betsaka. Resaka voin-kava-mahatratra tsy mila iadian-kevitra ny manome. Azon’ny governemanta atao ny manenjika mpisoloky amin’ny toe-javatra toy ireny saingy ilay fepetra raisina kosa dia tsy tokony hahatafiditra hatramin’ny tsy mpisoloky. Lasa mampihomehy ilay filazana samihafa mifanesy satria maneho ny tsy firaisankinan’ny mpitondra. Tsy ilay ain’olona mila vonjy no misongadina fa ny manampy. Mila feran’ny filoham-pirenena ihany ny fanenjehan’ireo mpikamban’ny governemanta sasany ny mpanohitra, hoy ity mpanao politika ity, fa manimba ny endriky ny fitondrana. Mikasika ny fijoroan’ny governemanta vaovao moa dia nilaza ny tenany fa lojika raha governemanta tekinisianina natao ho baikoana no najoron’ny filoham-pirenena satria tsy mazava ny ideolojia na foto-kevitra ijoroan’ny antokony. Mety hitondra fampandrosoana ihany izay saingy hiisatra sy tsy hipaka mivantana amin’ny vahoaka, hoy ny fanazavany.